फेरियो प्रचण्डको बोली, तनावमा आए ओली - VOICE OF NEPAL
फेरियो प्रचण्डको बोली, तनावमा आए ओली
२७ माघ २०७५, आईतवार ०२:०३ 197 ??? ???????
– मधूसुदन रायमाझी, काठमाडौैं
सरकारको काम प्रभावकारी नभएको भन्दै सत्तारुढ दलभित्रबाटै विरोध सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार सञ्चालन प्रभावकारी नभएको र पार्टी एकता प्रक्रियाले गति लिन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि चुलिदै गएको छ । पार्टी एकता भएको नौ महिनासम्म प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिएका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको कार्यशैलीको खुलेरै आलोचना गर्नुभएको छ ।
खासगरी भेनेजुएलाको विज्ञप्ती प्रकरणपछि अध्यक्षद्धय ओली र प्रचण्डबीच तनाब बढ्दै गएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डले विज्ञप्ती निकाल्न हतारो गरेर चिप्लिएको भन्ने अभिव्यक्ति दिए पनि प्रचण्डले त्यसप्रति आफू अडिग रहेको भनाइ दोहोयाएका छन् । एकतालाई टुंगोमा पु¥याउन गठित कार्यदलले काम गर्न नसकेर अनिर्णयको बन्दी भइरहेको बेला यी दुई अध्यक्षमा देखिएको विवादले एकता झन् जटिल र अन्यौल बन्दै गएको छ ।
सचिवालयमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमलगायतका नेताले प्रचण्डलाई साथ दिने हो भने पार्टीमा ओलीलाई निर्णय गराउन निकै कठिनाई हुने सचिवालयका एक सदस्यले बताए । ती सदस्यले भने,‘सरकार र पार्टी सञ्चालन एकै व्यक्तिले गर्दा काम प्रभावकारी हुन सक्दैन, अब एक पद एक व्यक्तिको अवधारणाअनुसार अगाडि बढनुपर्छ ।’